ခရီးသွား အများပြည်သူများခ င်ဗျာ မန္တလေး သို့ အချိန် လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းေ ရာက်လျင် – Shwewiki.com
ခရီးသွား အများပြည်သူများခ င်ဗျာ မန္တလေး သို့ အချိန် လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းေ ရာက်လျင်
February 24, 2020 By admin News
ခရီးသွား အများပြည်သူများခင်ဗျား… မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်
မန္တလေးသို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်လျင်ကိုယ်နှင့်မသိသော-မရင်းနှီးသော ဆိုင်ကယ်-သုံးဘီး-အငှားယာဉ်များဖြင့်ညပိုင်းတွင် (လုံးဝ) (လုံးဝ)အခြားနေရာများသို့ အထူးသဖြင့် ကားကြီးဝင်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကယ်ရီဖြင့် မကူးပြောင်းကြပါရန်….
နံက်မိုးလင်းသည်အထိ နီးရာဆိုင်တွင် စားသောက်၍ အနားယူနေကြပါရန်…..အကယ်၍ အချိန်လင့်ညပိုင်းတွင် သင်မသိသော ကယ်ရီ အငှားယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ခိုင်းမိပါကကယ်ရီသမားများသည် သူတို့အုပ်စုရှိရာသို့ တင်ဆောင် မောင်းနှင်သွားပြီးသင့်တွင်ပါလာသော တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းအားလုံးကို လူ့ယက်ယူငင်ခံရဖို့ -သေချာသလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ……..
အချိန်လင့်ညပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့တွင်းသို့ ကိုယ်မသိသော မရင်းနှီးသော မည်သည့် ကယ်ရီအငှားယာဉ်နှင့်မျှ မသွားလာကြပါရန်…..အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်…..ခရီးသွားမိန်းကလေးများအတွက် အထူးအန္တရာယ် ပိုများပါသည်….၎င်း Post အား တွေ့မြင်သူများအားလုံး ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးကြပါရန် အထူး မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်….
မုံရွာမြို့ တွင် ညအချိန် မတော် တွေ့ဆုံကြသည့် စုံတွဲ များအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပညာပေး
အမြင့် ဆုံး ထီဆုကြီးတွေ နဲ့ အက္ခရာမတူ ဘဲ ဂဏန်းတူရင် ပေါက်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတော့မည် …